China Vaccum Chikafu Packaging Bag vagadziri uye vatengesi | Leadpacks
Vaccum Chikafu Packaging Bag
Vacuum yekurongedza chikafu inobatsira kuchengetedza zvimisikidzo zvinyowani uye zvakagadzirira kushandisa.
Iyi vacuum bag inoita kuti zvive nyore kuchengeta michero nemiriwo mitsva pamwe nenyama nehuku. Chinhu chakakosha chekubika sous vide, mabhegi ekurongedza anofanirwa-kuve nekuwedzera kune chero kicheni ichitarisira kuwedzera mamenu avo kuti sanganisira sous vide ndiro. Zvakanaka zvakare kurongedza pamabhegi ekurongedza evacuum kune zvese zvaunoda kuchengetedza chikafu!
● Yakanakira kuchengetedza chikafu kwenguva refu
● Chiedza, Unyoro, Oxygen Barrier uye Puncture Resistant
●Kuti uwane zvibereko zvakanaka, chengeta zvokudya zvisina hunyoro hushoma
● Heat seal mabhegi kuitira kudzivirira kwakanakisisa
● Air tight barrier inochengetedza kutsva uye kuravira kwepakutanga, kunhuwa, uye ruvara rwezvokudya zvaunenge wachengeta
Vacuum packing inzira yekurongedza inobvisa mweya kubva pasuru isati yaiswa chisimbiso. Iyi nzira inosanganisira (nemaoko kana otomatiki) kuisa zvinhu mupurasitiki firimu package, kubvisa mweya mukati uye kuvhara pasuru. Shrink firimu dzimwe nguva rinoshandiswa kuve nekusimba kwakaringana kune zviri mukati. Chinangwa chevacuum packing kazhinji ndechekubvisa okisijeni kubva mumudziyo kuti uwedzere hupenyu hwesherufu yezvikafu uye, neinochinjika mafomu epasuru, kuderedza huwandu hwezviri mukati uye pasuru.
Vacuum packing inoderedza okisijeni yemuchadenga, ichidzikamisa kukura kweaerobic bacteria kana fungi, uye kudzivirira kubuda kwezvikamu zvinoshanduka. Inowanzoshandiswa kuchengetedza zvokudya zvakaoma kwenguva yakareba, zvakadai sezviyo, nzungu, nyama yakarapwa, cheese, hove yakasvuta, kofi, uye mbatata chips (crisps). Pane imwe nguva yenguva pfupi, vacuum packing inogona kushandiswawo kuchengetedza zvidyo zvitsva, zvakadai semiriwo, nyama, uye zvinwiwa, nokuti zvinodzivisa kukura kwebhakitiriya.
Item Name Vaccum Chikafu Packaging Bag
Material PA/PE,PET/PE,Naironi nezvimwe.
Application Zvibereko/Miriwo/Chikafu chegungwa/Nyama/Huku nezvimwewo
Chitupa ISO-9001, FDA test report/SGS test report etc.
Delivery Nguva Kutumirwa mumazuva 15-20 mushure mekubhadhara
Zvakapfuura: Kraft Simukai Pouches
Zvinotevera: Mupunga Vacuum Packaging Bag
Custom Food Packaging Mabhegi
Chikafu Packaging Bag
Zvokudya Packaging Plastic Bags
Chikafu Packaging Ziplock Bag